Toamasina : herisetra … herisetra hatrany (+vidéo)
Raiamandreny loham-pianakaviana efa 67 taona no nosamborin’ny hery famoretana ao Toamasina ny faran’ny herinadro teo. Nampangaina ho naniraka zatovo handroba ny fiaran’ny Lt. Col. Lylison ny tenany ary nampihorohoroana satria mpitolona mitaky ny ara-dalàna izy mianakavy. « Inona no mbola itakianareo ny fiverenan-dRAVALOMANANA » hoy ny betroka arahina daroka niaretan’izany Raiamandreny izany araka ny vaovao nampitaina tamin’ireo mpitari-tolona mifandray amin’ny fianakaviany.
Tsy vitan’izany fa nodorana tamin’ny herinaratra avokoa ny fianakaviany rehetra hany ka tsy mbola tafarina ny zafikeliny vao telo taona monja hatramin’izao. Irony fitaovana antsoina hoe « taser » irony no nampiasain’ny ekipnan’ity mpitarika ny FIS ity tamin’izany ary dia izao nampitondra faisana zaza tsy ampy taona izao ny vokany. Nalefa tany amin’ny fampanoavana ao Toamasina avy hatrany moa ity Raim-pianakaviana ity ary isaorana ny fitsarana any an-toerana fa afaka madiodio saingy tsy niverina kosa ny vola enina hetsy sy iray tapitrisa ariary izay norobain’ny ekipan’i Lylison. Vonona hatrany ny hanohy ny tolona anefa ireto fianakaviana ireto ary nanome toky izy ireo fa vao maika ho fanoitra hoazy ireo iny tranga nahazo azy mianakavy iny.
Toaka sy vehivavy …
Raha ny filazan’ny mponina any Toamasina dia « revy » no nahavery ny vola sy ny entan’ny Kol. Lylison. Fantatra fa nimamo toaka ralehilahy ary nitondra vehivavy tany anaty « bungalow ». Rakotrin’ny fahavetavetana angamba ny mpitarika ny FIS ka hadinony ny nanidy ny ny fiarany. Tsy hita vokatr’izany ny vola iray tapitrisa ariary (arakin’ny filazan’i Lylison) sy ny fitaovan-tserasera raitra IPad iray. Taorian’izany dia tovolahy iray no niharan’hy hatezerany ary dia notifiriny avy hatrany na dia tsy nananana porofo marina aza ny mikasika ny vola sy ny entana very izay nolazaina fa tany aminy. Mbola mihevitra ny tenany ho tompon’ny aina hatrany ny mpomba an’i tgv raha ny fehin’ity zava-mitranga tany Toamasina ity. Tokony tsaroan’ny rehetra anefa fa « ny tody tsy misy fa ny atao no miverina ».
Jly Ramananarivo Claude : novonoina niaraka tamin’ny vady aman-janany
Io maraina io vao hita tao an-tranony teny Andohanimandroseza ny nofo mangatsiakan’ny Jly Ramananarivo Claude sy ny vadiny ary ny zanany vavy izay vao 16 taona. Raha ny fanamabarana voalohany nataonn’y dokotera avy amin’ny BMH dia nodorana tamin’ny herinaratra izy telo mianaka ireto ary fomba feno habibiana no nentina nanapitra ny ainy. Raha ny filazan’ny nanatri-maso dia efa simba avokoa ny razana ary nandriaka mihitsy ny rà tao an-tranon’izy ireo. Araka ny nambaran’ireo tomponanandriakitra eo amin’ny fokontany Andohanimandroseza ihany koa dia tsy misy endrika halatra velively ny fahitana ny zava-nitranga tao an-tranon’ny Jeneraly na dia misy fiara Toyota Rav4 iray aza no fantatra fa tsy hita amin’izao fotoana.
Tsy hita popoka …
Roa herinandro lasa izay no tsy hitan’ny fianakaviany ny Jly Ramananarivo Claude mianakavy raha tokony nanatrika ny fivoriam-pianakaviana. Tsy fanaon’izy ireo anefa izany ary dia nanaitra ireo fianakaviana ireo saingy ny fifanatonana no dingana voalohany natao tao anatin’ny fahatairana. Rehefa nampandre ny borigadin’ny zandary teny Alasora ny fianakaviana dia nanatona ny rahalahin’ny tompokolahy teny Ambohimalaza ny zandary ary teo no nahafantaran’ny fianakaviana fa tena tsy hita tokoa izy telo mianaka ireto. Androany ary dia nanapa-kevitra ny fianakaviana sy ny zandary avy eny Betongolo fa hamonjy ny toeram-ponenan’ny Jeneraly eny Andohan’Imandroseza ary dia izao nahita maso ny habibiana natao tamin’ny fianakaviany izao.
Iza moa ny Jly Ramananarivo Claude ?
Andraikitra maro teo anivon’ny zandarimariam-pirenena no efa notazomin’ity manamboninahitra ambony ity. Isan’ny tena nanamarika ny lalana nolalovany amin’ny asany ny naha-kaomandin’ny zandarimariam-pirenena azy tamin’ny taona 2006. Fantatra ihany koa fa, ny taona 2006 ihany, dia izy no nitarika ny fanafihana ny BANI Ivato fony nikonokonona fanonganam-panjakana ny Jly Fidy sy ny namany. Tao anatin’ny krizy 2009 indray dia isan’ireo manamboninahitra ambony tokony nandray ny « directoire militaire » ny tenany tamin’ny 17 Martsa 2009 rehefa namindra ny fahefana tamin’izy ireo ny Filoha RAVALOMANANA. Taorian’ny tranga teny amin’ny Episcopat anefa dia anisan’ireo namindra ny fahefana tamin’i tgv ihany koa ny Jly Ramananarivo Claude.
Antananarivo : tsy mandeha amin’ny laoniny ny fiainam-bahoaka (+vidéo)
Maloto ny tanàna, simba ny lalàna ary manjaka ny tsy fandriam-pahalemana. Izany no andavanandron’ny Malagasy monina eto an-drenivohitra amin’izao fotoana. Ny fiadidiana ny tanàna anefa dia manana teti-bola mbola mihoatra lavitra ny an’ny ministera sasantsasany saingy tsy hita taratra amin’ny fitantanana izany. Ny hanampy isa ny « police des marchés » hanenjika ny mpivarotra amoron-dalana no mahamaika ny PDS fa tsy ny fitsinjovana izay tena maharary ny valala bemandry.
Ankoatra ny fandaminana sy ny fanatsarana ny momba ny endrikin’ny tanàna dia anjara asan’ny ben’ny tanàna koa, na izay mitana ny andraikitra momba izany, ny mijery izay hampandry fahalemana ny mponina ao aminy. Ny politika rahateo, araka ny famaritana, dia fikarohana ny mahasoa ny tanàna sy ny mponina ao aminy. Toa tantara sisa ny fahafahana mivezivezy amin’ny alina teto an-drenivohitra tany amin’ny taona 2006 tany. Ankehitriny tsy fantatra intsony na fahavalo na namana izay mifanenana amin’ny tena raha sendra maizina any am-pandehanana. Omaly ohatra teny amin’ny 67 Ha dia nisy olona notanan’ny jiolahy an-keriny tao an-tranony nandritran’ny 20 ora mahery saingy « tsy nisy nahita » raha tsy efa tafavoaka. Androany indray dia fantatra fa manamboninahitra jeneraly iray niaraka tamin’ny vadiny sy ny zanany vavy no namoy ny ainy tao an-tranony eny Andohanimandroseza ary nasitriky ny mpanao ratsy tao amin’ny fitehirizana korontana izy telo mianaka ireo. Izany isan’andro no iainana eto Antananarivo ankehitriny.
Ny momba ny fotodrafitrasa indray dia zary nofy ny lalana misosa sy mikodana fa lavadaka no iainan’ny mpamily. Analakely sy ny manodidina angamba sisa azo jerena fa ny ankoatra izay dia « nivadika orera » araka ny tenin-jatovo. Mampanontany tena ihany ny zava-misy indrindra fa tsy mahatsiarotena voahozongozona mihitsy ny filohan’ny delegasioan manokana na dia efa toy izany aza no iainana. Raha ny fijerin’ny mpanara-baovao dia tambin’ny fanampiana ny fanonganam-panjakana tamin’ny 2009 ny toerany ka dia mandry ivohon’ny vato Razafindravahy. Tsy miafina amn’ny maro ihany koa fa misy hainoamanjery iray ao anatin’ny vondron’orinasan’ny PDS no mbola miaro fatratra ny FATE hatramin’izao ankoatran’ny gaboraraka iaharan’izy ireo mihinana amin’ny harem-pirenena.
Filaminana anaty : nanao sinema indray ny EMMOREG (+vidéo)
Rehefa avy nampanantena fandraisana andraikitra mikasika ny fitandroana ny filaminana anaty i tgv dia « nandray andraikitra » tokoa ny EMMOREG. Nanomboka ny alarobia 28 martsa ka hatramin’ny zoma 30 martsa dia nivoaka alina ireto « mpitandro filaminana » ireto. Ny alina voalohany dia narahina mpanao gazety izany fivoahana izany. Diso fanantenana tanteraka anefa ireo mpanangom-baovao ireo rehefa nandeha ny « opération » satria arabe mazava hatrany no nolalovan’ny fiarakodia nitondra azy ireo. Raha niainga tany Ankadilalana dia nolazain’ny Jly Baomba ny mpanao gazety fa afaka misafidy izay toerana fantatr’izy ireo fa saro-pady ka tokony andalovana.
Raha nozaraina tamin’ireo mpitandro filaminana ny soso-kevitra amin’ny tokony handalovana eny Ankadikely Ilafy dia nanda izy ireo. Tsy misy tsy mahalala anefa fa, ankoatran’i Itaosy sy ny manodidina, dia isan’ny faritra tena be fanafihana mitam-basy ity tanàna iray ity raha ny eto an-drenivohitra no lazaina.
Tsy mbola mandry fahalemana hatreto ny Malagasy ary mbola manampy trotraka izany ny tsy fananana rafitra hiantsapazana raha sendra ny hetraketrakin’ny mpanao ratsy. Raha ny fantatra mantsy dia matetika no manda tsy hamonjy ireo tra-boina ny zandary amin’ny toerana sasany noho ny antony tsy fantatra mazava. Tsara anefa ny mampahatsiahy fa ny hetra aloan’ny vahoaka no andoavana ny karaman’izy ireo.
« Herikerika Madagasikara » : hanamaivana ny voka-dratsin’ny krizy (+vidéos)
Fianakaviana 40 tao anatin’ny fokontany dimy eto an-drenivohitra no notoloran’ny fikambanana « Herikerika Madagasikara » fanampiana androany. Fianakaviana Malagasy maromaro monina any dilam-bato no nanangana ity fikambanana ity ary manana tanjona ny hitsinjo ny sosialim-bahoaka indrindra amin’izao krizy lalovan’ny Firenena izao. Akora ialaina an-davanandro na PPN no natolotra ireo tra-boina ireo araka izany tanjon’ny fikambanan izany ka ny solombavam-bahoaka teo aloha an’ny boriborintany voalohany eto Antananarivo renivohitra izay sady mpikambana ao amin’ny CST amin’ny anaran’ny Ankolafy RAVALOMANANA no nisolotena ny fikambanana nanolotra izany tamin’izy ireo.
Faritra telo ao anatin’ny boriborintany niadidiany teo aloha no nisantarana izao hetsika izao araka ny fanazavan’ny dokotera Jules Andriamaholison. Raha ny nambarany dia fifandraisana ihany aloha hatreto no ataony amin’ny fikambanana fa efa eo am-pieritreretana ny hananganana amin’ny fomba ofisialy ny sampana eto an-tanindrazana ny « Herikerika Madagasikara ».
Mila paikady maharitra …
Isan’ny olana goavana eo amin’ny mponina manodidina an’Andoahatapenaka ny fiakaran’ny rano amin’ny fotoanan’ny fahavaratra. Tapaka noho izany ireo lalan-kely mihazo ny fonenan’izy ireo ary dibo-drano tanteraka ny tranony. Voatery izy ireo mamonjy irony toerana manokana natao hialofan’ny tra-boina irony na dia tsy ara-pahasalamana velively aza izany. Raha ity eto Andohatapenaka faharoa ity ohatra dia mifanila tanteraka amin’ny fitahirizam-pakon’ny kaomina ny tranolay itoeran’ny tra-boina. Fokontany efatra be izao anefa no mandefa ny olony hialokaloka amin’ireo tranolay roa hany mijoro eto amin’ity toerana ity. Ahiana arak’izany ny handairan’ny valan’aretina indrindra amin’ireo zaza amam-behivavy maro mitoby vonjy maika eto. Hetahetan’izy ireo, araka ny fanazavan’ny filoham-pokontany teo aloha, ny hanaganana foto-drafitrasa maharitra hiatrehana ny fahavaratra fa indrindra ny hanamboara ireo lalan-kely any anaty tanàna mba hanamaivana ny fampiantranoana tamba-be amin’ny andro ratsy.
Olana sosialy : manomboka mivondrona ny vehivavy Malagasy
Mananika ny folo ankehitriny ny fiakaviana vehivavy Malagasy nanangana sehatra iray ahafahana mifampitsinjo ary mbola fanombohana ihany izany raha ny nambaran’ny mpandrindra. Mahatsapa ny vesatrin’ny krizy amin’ny sosialin’ny isan-tokantrano izy ireo ka vonona hampivoitra ny talenta ananan’ireo mpikambana tsirairay mba hahitana lalam-barotra hifanampiana. Ny hifanabe sy hifanavotra amin’ny fiatrehana ny fiainana no tanjon’izy ireo ary nanainga azy hivondrona mba hanamora izany.
Manomboka any amin’ny fikambanana renim-pianakaviana, mandalo amin’ny mpanao asa-tanana ka hatrany amin’ny mpiasan’ny orinasa afakaba very asa no mandrafitra izao sehatra iraisan’ny vehivavy izao. Araka ny fantatra dia efa hanao varotra fampisehoana sahady izy ireo afaka herinandro vitsy mba ho fampahafantarana amin’ny fomba ofisialy izao firaisana izao. Raha ny nambaran’izy ireo moa dia mikendry ny fanampiana ny sosialin’ny osa ihany koa izy ireo. Ho fankalazana ny andron’ny vehivavy ohatra dia nanatitra fanampiana ho an’ireo Raiamandreny efa mahazo taona taizana ao amin’ny « Foyer de Vie » ao Andrainarivo izy ireo. Tsy hoe fanampiana fe fanampiana fotsiny fa ho fampisehoana amin’izao tontolo izao fa tsy fanao ny mitsipa-doha laka-nitana ka manao zinona ny zokiolona raha te-ho ela velona eto amin’izao tany fandalovana izao.
Sefona devoly : mpitondra fanjakana no voatonotonona (+vidéo)
Noroahin’ny mpitondra tany Tsiroanomandidy hody aty an-drenivohitra ireo mpiandry niasa tany an-toerana noho ny tranga mahavariana iray. Niantso vonjy taty amin’ny foibe FLM mantsy ireo raiamandreny any amin’ity distrika ity noho ny aretina mahazo mpianatra maro ao amin’ny sekoly iray. Namaly ny antso avy hatrany ny FLM 67Ha sy Ambohibao ka nandefa mpiandry handroaka ny devoly izay mitondra izany rofy izany amin’ireto zanaka Malagasy ireto.
Rehefa tonga tany an-toerana anefa ny andiany voalohany ka niatrika ny asa sy fampaherezana narahina fandroahana devoly dia niteny ny fanahy ratsy ka namboraka ny anaran’izay naniraka azy ireo. Araka ny vaovao dia mpitondra fanjakana ambony nitarika hetsika iray taona vitsy izao no voatonona ary dia nitovy avokoa ny nambaran’ireo nitoeran’ny fanahy ratsy nandritra izany asa fandroahana izany. Vokatr’izany ary dia nandray fepetra ny mpitondra any amin’ny faritra Bongolava sy ny ao amin’ny ditrikan’ny Tsiroanomandidy nampody ireo mpiandry sady nanakana avy hatrany ny fahatongavan’ny andiany faharoa izay tokony nanainga teto an-drenivohitra androany.